Mivantana amin’ny 22 Avrily—Myanmar: Fanonganam-panjakana sy tsy fankatoavam-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2021 5:23 GMT
Kisarisarin'ny miaramila sy sivily avy amin'i Badiucao. Nahazoana alalana.
Nanongam-panjakana ny Tatmadaw, miaramilan'i Myanmar, tamin'ny 1 Febroary. Roa volana mahery aty aoriana, an-jatony no novonoin'ny jadona miaramila, an'arivony no nohazonina, ary mbola betsaka noho izany no miatrika didy fampisamborana. Ny tsy tsinjon'ny miaramila kosa, anefa, dia ny fifaharana sy ny fihaikana nataon'ny olom-pirenen'i Myanmar, izay mbola mihaika ny fanonganam-panjakana sy ny fampihorohoroan'ny tafika mitam-piadiana.
Namorona tamim-pahamalinana fomba sahisahy hanehoana ny tsy fitovian-kevitra, na eo aza ny fanapatapahana ny aterineto, ny fanorisorenana sy ny famelezana mpanao gazety, ary ny fanidiana ankaterena ireo seha-baovao marobe ny hetsika pro-demaokrasia ao Myanmar.
Koa satria mbola mitohy ny toe-draharaha, ary ao anatin'ny fitantarana izany ihany koa, dia hampiantrano webinar ny Global Voices 22 aprily amin'ny 1 ora tolakandro GMT (kitiho ity rohy ity mba hikajianao izany ora izany ao amin'ny faritra misy anao) hijerenao izay mitranga ao Myanmar .
Amin'ny firesadresahana amin'ny olona asainay sy amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny olona ao anatin'i Myanmar, hanavatsava hijery izany fiainana anaovan'ny miaramila fahirano—ary hifandanana amin'izany hery izany, indrindra ao anatin'ny valan'aretina. Ho fantatsika bebe kokoa ny momba ny hetsika tsy fankatoavam-bahoaka ary ahoana ny hahatonga izany ho fitaovam-piadiana mahery vaika mamely ny didy jadona miaramila. Ary farany, hotadiavinay izay miteraka firaisankina sy hanolorana amin'ny fomba mivaingana ho an'ny mpamakinay sy ny vondrom-piarahamonina manerantany hanohana ny hetsika demaokrasia ao Myanmar.
Tsy misy vola aloa ny fotoana ary misokatra ho an'ny rehetra ary halefa aterineto mivantana ao amin'ny Facebook Live, YouTube ary Twitch.
Mong Palatino tonian'ny Global Voices Azia atsimo atsinanana, Mong no mitarika ny fitantaranay amin'ny toe-draharaha any Myanmar. Ankoatra ny fandraisany ny fotoana, dia hatolony ny topi-mason'ny tetezamitan'ny firenena mankany amin'ny demaokrasia tao anatin'ny folo taona sy izay nitranga hatramin'ny fandraisam-pahefana an-kery nataon'ny miaramila.
Ben Crox mpanangon-kevitra BarCamp monina ao Hong Kong sady mpanazatra momba ny fahaizana sy teknolojian'ny fifandraisana amin'ny media vaovao, efa nandraharaha tao Myanmar i Ben ary hiresaka amin'ny fomba iatrehan'ny vahoaka ny famoretan'ny miaramila, sy ny fomba ahafahan'ny olona ivelany manampy.
Hsa Moo mpikambana ao amin'ny Karen Environmental and Social Action Network (KESAN na tambajotran'hetsika sosialy sy ara-tontolo iainana Karen), horesahan'i Hsa wny toe-draharaha ao amin'ny fanjakana Karen sy amin'ny faritra hafa ao Myanmar.
Manantena ny fanatrehanareo izahay amin'ny 22 avril amin'ny 1ora folakandro GMT (tsindrio ny rohy hamadihana izany ho amin'ny oran'ny toerana misy anao)!